SUSTAINABILITY - MAKEFOOD YEMAHARA CO., LTD
Pre-Fried & Breaded Hove
Tiri kusiyanisa zvigadzirwa zvedu kuti zviwane zvido zvemusika.
Makefood Pane Kugadzikana
Kuchengetedza cheni inoenderana neyedu kwakakosha mukuenderera mberi kwebhizinesi redu neindasitiri yacho seyakazara.
Semumwe wevatengesi vezvokudya zvegungwa munyika, isu tine fariro yakapihwa muhutano hwakareba hwenyanza dzedu. Huwandu hwakakura hwezvikafu zvegungwa zvakasungwa-zvinokonzeresa izvo zvinogona kutungamira mukubata hove, kusingadiwe-kubata, uye nzira dzinokanganisa dzekubata. Nezviito zvedu, tinofanirwa kuona kuti tinochengetedza nzvimbo yekugara yegungwa pamwe nenzvimbo dzinovimba nekukohwa zviwanikwa, kumazera anotevera anouya.
Kuzvipira kwedu kugadziriro yezvokudya zvegungwa ndeyerefu-refu sezvo isu tichiziva kuti hapana zvekukurumidza kugadzirisa. Isu tinotsigira avo vehove vane hunyanzvi, hunogadzikana hwekuredza maitiro pamoyo wezvese zvavanoita.
Isu tinotora maonero ekuti isu tinofanirwa kushanda mukati meindasitiri kutungamira uye kukurudzira, kukurudzira vatengi vedu nevatengesi munzira dzakasimba dzekubata nekugadzira.
Isu tinotsigira basa remasangano akati wandei asiri ehurumende seMSC (Marine Stewardship Council) neAlaska RFM (Responsible Fisheries Management) avo vanogadza yakakwira indasitiri zviyero kuverengera kushomeka kwezvakatipoteredza pane yedu Global Fisheries.
Nheyo dzedu dzinoraira kuti isu:
Tsvaga wechitatu-bato rakazvimiririra kubvumidzwa pese pazvinogoneka uye upe zvaunofarira kune vanotengesa avo vanobvumidzwa.
Isu tinoda kuziva kunobva uye nekwakabva zvigadzirwa zvatinotengesa uye kuyedza kupfupisa cheni yekutengesa chero pazvinogoneka.
Hatife takaziva tichitengesa zvigadzirwa zvinokanganisa zvakatipoteredza kana kuisa njodzi pakurarama kwemarudzi pasina chirongwa chekugadzirisa humbowo hwechengetedzo yechigadzirwa.
Isu tinokurudzira vatengi vedu nevatengesi kuti vaite sarudzo dzakaomarara.
Tine budiriro kuburitswa kwepakeji yedu nyowani inokwenenzverwa yezvigadzirwa zvedu zvegungwa zvine chando muna 2020. Chishuwo chekukanganisa uye nekugadzira kufamba kwakatungamira kuMakefood shanduko mukushandisa kweyakagadzika kurongedza. Nekuita izvi tinotarisira kuita mutengi, funga uchiziva nezve kukanganisa kusingashandisike kurongedza kwepurasitiki kune zvakatipoteredza; uye pamwe chete tinokwanisa kukwidziridza kugadzirwa kwayo kwakanyanya. Chinangwa chedu kuva, kwete chete kuchengetedza nzvimbo dzemadhorobha dzakachena asi zvakanyanya kukosha, makungwa edu, uko zvigadzirwa zvedu zvinotangira. Nekudaro, kudzikisira zvakashata zvinhu zvine chekuita neindasitiri yezvokudya zvegungwa
Ku Makefood isu takatora nhanho yekutanga, uye pamwe chete, isu tine mukana wekugadzira ramangwana rakanaka uye rakachena. Kukurudzira kuenderera kuburikidza nehunyanzvi.
Hatitende kuti maitiro aya achazombomira. Hapana chinozombo gadzikana zvachose. Isu tinoona urwu serwendo kwete sekuenda.
Makefood ichapa vatengi vedu nemabasa akanaka kwazvo. Isu tinomira kuseri kwezvigadzirwa zvedu uye tinogadzirisa chero nyaya dzinogona kumuka munzira yekutsvaga, kutumira uye kuendesa. Tichapa mitengo yekukwikwidza pamidziyo yese - yakavimbiswa.
Kana iwe uine mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota siya ruzivo rwako rwekuonana uye isu tinokutaurirana newe mukati maawa makumi maviri nemana.
Chikamu 4810, Huarun Kuvaka A, No.6 Shandong Road, Qingdao ， China
Hot Zvigadzirwa, Sitemap, China Frozen Tilapia GS, Frozen Tilapia mwedzi wakatemwa, China Frozen Tilapia, Frozen Tilapia GGS, China Tilapia GS, ASC tilapia fillet,